Ilungelo Lase-US Lokumangalela I-EPA Yokukhishwa Kwemibhalo Yezinsalela zeGlyphosate
Posted on Kwangathi 22, 2018 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesibili, Meyi 22, 2018
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: UCarey Gillam (913) 526-6190
I-US Right to Know, inhlangano ethuthukisa abathengi, wafaka icala ngoMsombuluko ngokumelene ne-Environmental Protection Agency (EPA) ngokwephula izinhlinzeko ze-Freedom of Information Act (FOIA). IPublic Citizen Litigation Group, inkampani yabameli bezintshisekelo zomphakathi eWashington, DC, imele i-US Right to Know kulesi senzo.
Icala, elifakwe eNkantolo yesiFunda e-US eWashington, DC, lifuna amadokhumende ahlobene nokusebenzisana kwe-EPA neFood and Drug Administration (FDA) maqondana nokuhlolwa kwamasampula okudla ngensalela yamakhemikhali okubulala ukhula okuthiwa i-glyphosate. IGlyphosate umuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu emhlabeni futhi uyisithako esiyisihluthulelo semithi yokubulala ukhula ebizwa nge-Roundup yakwaMonsanto Co. kanye neminye imikhiqizo yokubulala ukhula. Ukukhathazeka ngaleli khemikhali sekukhulile selokhu iWorld Health Organisation ngo-2015 yathi ochwepheshe bayo bomdlavuza bahlukanisa i-glyphosate njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu.
Sekungamashumi eminyaka, i-FDA ivivinye njalo ngonyaka izinkulungwane zamasampuli wokudla ukuthola izibulala-zinambuzane ezahlukahlukene ukunquma ukuhambisana namazinga okubekezelelana asemthethweni asungulwe yi-EPA. Kepha kwakungu-2016 kuphela lapho i-FDA yaqala ukuhlolwa okulinganiselwe kwezinsalela ze-glyphosate ekudleni, futhi i-ejensi isazobika imiphumela esemthethweni evela kulezo zivivinyo. Imibhalo etholwe ngaphakathi kwe-FDA ikhombisa izinsalela zombulali wokhula ezitholakale kumasampula amaningi okudla, kufaka phakathi uju ne-oats.
I-US Right to Know ifuna ukuthi i-EPA ihambisane nesicelo se-FOIA esenziwe ngoJulayi 2016 esifuna ukukhishwa kwemibhalo ephathelene nokuxhumana kwe-EPA ne-FDA maqondana nokuhlolwa kwezinsalela ze-glyphosate, kanye nanoma yikuphi ukuxhumana i-EPA eye yaba nakho neMonsanto mayelana okufanayo.
Icala liphinde lacela ukuthi i-EPA ithobele i-FOIA efakwe ngoFebhuwari 2017 ifuna amarekhodi phakathi kwabasebenzi be-EPA kanye neCropLife America, inhlangano yabasebenzi bemboni yezolimo.
Icala lisho ngqo ukuthi i-US Right to Know inelungelo elisemthethweni ngaphansi kwe-FOIA kumarekhodi aceliwe nokuthi i-EPA ayinasisekelo somthetho sokwenqaba ukukhiqiza la marekhodi. Isikhalazo sicela inkantolo ukuthi iyalele i-EPA ukuthi yenze amarekhodi aceliwe atholakale ngokushesha.
Icala liza ngemuva kwezinsuku ezintathu ummeli waseMelika uTed Lieu uthumele incwadi ku-FDA ukucela imininingwane eminingi ngemizamo ye-FDA yokuhlola amazinga e-glyphosate ekudleni. Le ncwadi ilandela umbiko oshicilelwe ku- The Guardian okukhombisa ukuthi i-glyphosate, ikhemikhali elisetshenziswa kakhulu emithini yokubulala ukhula, lingatholakala ekudleni okuvamile.
I-Public Citizen Litigation Group ibanga amacala abandakanya uhulumeni ovulekile, imithetho yezempilo nokuphepha, amalungelo abathengi, ukufinyelela ezinkantolo, kanye neSichibiyelo Sokuqala. Ingalo ebanga icala lenhlangano kazwelonke, engenzi nzuzo yokukhuthaza abathengi, iPublic Citizen. I-Litigation Group ivamise ukumela abantu nezinhlangano ezifuna ukufinyelela kumarekhodi ngaphansi koMthetho Wenkululeko Yolwazi. Imininingwane engaphezulu ingatholakala ku- isakhamuzi.org.
Ukukhishwa Kwezindaba, Amacala ethu EPA, glyphosate, USRTK